एसईई नतिजा आज (शनिबार) अपरान्ह ३ बजे सार्वजनिक हुँदै | News Nepal
>>राजनारायण पाठकले घुस लिएको भिडियो बुझाए सुवास नेम्वाङले
>>देउवाका विरुद्ध गगन थापाले दिए यस्तो दनक, पार्टीमा भाग खोज्न कोइराला परिवारको शरणमा !
>>रहेनन् प्रदेश सभा सदस्य उत्तर कुमार ओली !
>>तपस्वी भनिएका बम्जन गायब, प्रहरीले नै फेला पार्न सकेन !
>>नेपाल प्रहरीका ४० एसपीको सरुवा, २६ को पदस्थापना, को कहाँ ?
एसईई नतिजा आज (शनिबार) अपरान्ह ३ बजे सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं,९ असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस वर्षको सेकेण्डरी एजुकेसन इक्जामिनेसन (एसइइ) को नतिजा आज शनिबार अपरान्ह ३ बजे सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
यस बर्ष प्राविधिक धारको नतिजा पनि एकै पटक सार्वजनिक हुने भएको छ। कक्षा १० को अन्तिममा लिईने यस बर्षको परीक्षामा सहभागी हुन देशभरबाट ४ लाख ८५ हजार ५ सय ८६ परीक्षार्थीले फारम भरेका थिए । परीक्षामा कति सहभागी भए भन्ने कुरा नतिजा संगै सार्वजनिक हुने छ ।
शिक्षा ऐनमा भएको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म हुने ब्यवस्था गरे पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको असक्षमताका कारण परीक्षाको व्यवस्थापन साविककै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत् भएको हो । आगामी वर्षदेखि प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ ।
माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७१ अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारका प्रश्नपत्रका आधारमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । यस अनुसार अनिवार्य विषय तर्फ गणित बाहेक बाँकी सबैमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रकाशित मिति : 2018-06-23
राजनारायण पाठकले घुस लिएको भिडियो बुझाए सुवास नेम्वाङले
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको भिडियो...
देउवाका विरुद्ध गगन थापाले दिए यस्तो दनक, पार्टीमा भाग खोज्न कोइराला परिवारको शरणमा !
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध कडा अभिव्यक्तिलाई साथ दिएका छन् । नेता थापाले...
रहेनन् प्रदेश सभा सदस्य उत्तर कुमार ओली !
काठमाडाैं । प्रदेश सभा सदस्य उत्तर कुमार ओलीको उपचारको क्रममा निधन भएको छ । सवारी दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका...
तपस्वी भनिएका बम्जन गायब, प्रहरीले नै फेला पार्न सकेन !
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले तपस्वी रामबहादुर बम्जन जिल्लामा भएनभएको यकिन नभएको जनाएको छ । आफूलाई तवस्वी बताउने बम्जनमाथि...
नेपाल प्रहरीका ४० एसपीको सरुवा, २६ को पदस्थापना, को कहाँ ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका भर्खरै बढुवा भएका २६ जना प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) हरुको पदस्थापना र ४० जनाको सरुवा गरेको छ...
काठमाडौँ । देशभरका झण्डै ८० हजार किलो मिटर सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र सुधारको काम कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन...
समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी बर्खास्त
काठमाडौंं । सरकारले समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेको छ । फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरीषद् बैठकले परिषदका उपाध्यक्ष निलमणि बराल,...
तीन मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारी तयारी (मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु)
सरकारले तीन मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी गरेको छ। मेडिकल कलेजका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास गर्नका लागि भन्दै मन्त्रि परिषदको...
कुनैपनि निर्णय नगरि सकियो नेकपाको बैठक
काठमाडौं । सत्तरुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवलय र पार्टी एकता कार्यदलको बैठक संयुक्त बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको...